MIL’UU WAYYAANEE-Yaazoo Kabbabaa Hordofaatiin-Wayyaaneen maaf kana gooti? – Beekan Guluma Erena
MIL’UU WAYYAANEE-Yaazoo Kabbabaa Hordofaatiin-Wayyaaneen maaf kana gooti?	Beekan Erena
Poems January 22, 2017
Mil’uu wayyaanee-Yaazoo Kabbabaa’tiin
Yeroo ammaa kanatti wayyaanonni qabsoo hundagaleessa Oromoo laamshessuufi toogtaalee adda addaa gadi fiduun dhama’aa jirti. Isa kana keessaa tokko kan amma namoonni adda addaa “Liyyuu poolis” jedhanii waaman kana. Wanti kun akkanuma jedhamee waammamuun isaatuu wayyaanedhaaf boqonnaa kennaaf. Waraanni bifa kamiinuu,karaa kamiinuu Ooromoorratti labsamu kamiyyuu kan qindaa’ufi kan hoogganamu Wayyaanedhaani. Ammallee taanan nuti Obboleessa Ooromoo kan ta’e Sumaaletu nu waraanaa jira jennee dubbachuudhafis ta’ee akeeka akkasii hin qabnu. Waraanni kun kan qindaa’es ta’ee kan itti adeemamaa jiru Wayyaanotaani. Ragaa inni guddaan ammoo loltoota wayyaanee achi keessatti wareegaman keessaa eenyummeessan fuudhamee ilaalamnaan kan hedduu isaanii kan waraana ittisa wayyaanee ta’uu isaati.
Maqaa “Liyyuu poolis” jedhu kanallee maqaa somaaleetti maxa’attee achas baasuun ishii boqonnaa argachuuf waan ta’eedha. Yeroo kana jedhu ammoo namoonni akka Abdii alleey faana qulqulluudha jechuu kootii miti.
Wayyaaneen maaf kana gooti?
1. Xiyyeeffannaa qabsoo Oroomoo garagarchuuf: Kun qabxiilee lama jajjaboo of keessaa qaba. Jalqaba: Oromoon diina isaa innikaa -Wayyaanee dhiisee akka diina ammeessaatti garagaruufi sana keessa isaan haala mijeeffachuuf. Kan biraa adeemsa qabsoo Oromoo isa bara kanaa keessahuu gochaa Atileet Fayyisaafi Qeerroon biyya keessaa godhan, Haala artistoonni keenya bakka hundaa itti jiran, jabina mooraa qabsoo Oromoo keessa jirurraa kan ka’e dhiibban addunyaalessaa waan itti hammaateef kan ofirraa garagarchuufi (Attention Diversion ykn Napoleonistic approacha) ta’a jechuudha
2. Ofii ishiitiif xiyyeeffannaa argachuuf.Ofii ishiitiif akka mootummaa filatamtuu taatee ija Addunyaattis ta’ee saboota kan biroo biratti ragaa argachuuf yaada xiqqashuu yaaddameedha.
3. Boqonnaa argachuuf: Mootummaan tokko yeroo dhiibban keessoo itti hammaate waan godhu keessaa fagaatee bahee biyya biraa waliin waraana dhimma itti hin qabne bana. Kun gatii waraanarratti bahu san caalaa boqonnaa yaadaafi sammuu argatan saniin haala sirreeffachuuf yeroo kan biraatii abbaltii laatanii ofoo gola keessatti mari’atan uumaf.Kanaan walqabatee akkatti boqonnaa argatan diina silaa isaan hudhee qabe san gama huna namaafi meeshaanis dadhabsiisuun qaawwa jiru hundatti fayyadamanii akka laamsha’u gochuun gaafa san waliin raawwatee as deebi’u salphaatti cabsuuf oolaf.
4. Warra duraanuu yakkaan himatte ammas yakkitee
dhiyeessuuf(Oromoofi Sumaalee) Abdii Alleey waan hin hubatin qaba. Mootummaan wayyaanee isaanillee hanguma Oromoo jibbitu jibbiti. Dhaabni maqaa Sumaaletiin socha’uufi kan Ooromoo qixxuma yakkamanii jiru. Asirraa wayyaaneen wanti fayyadamuu dandeechu dhaabbilee kana lamaan bifa walfakkaatuun Baha Afrikaa goolessuufi jettee himachuun ofii ishiitii mootii qixa hin qabne taatee as bahuuf ajandaa ta’aaf. Gaafa san lachuu(Oromofi Sumaalenillee) qixxuma miidhamoodha.
5.Gedduu taa’uu(Sitting inbetween) kan jedhu san uummachuuf:Wanti kun ammoo kutoodhan faayidaa siyaasaa argachuudha. Bara Kolonii Afrikaa daangaan Ingiliizonnifi Faransaayonni keessa turan hundi isaanii yeroo har’aa kanallee nagaya hin qaban. Sababi isaa biyyoota Ollaa walii jiran gedduu kutoo seenaa keessatti hiikkachuu hin dandeenye lafa kaa’anii bahan. Wayyaaneen waan amma gootu kanaan qabxii kana lamaan irratti waan lama fayyadamuu malti. Inni duraa walnyaatinsa saboota kana lamaanii facaasuun callaa siyaasaa isaan gedduudhaa haammachuu yoo ta’u kanatti aanee ammoo kan jiru yoo biyallee gadhiiftee kan baddu taane walitti eegee lamaa walitti hiitee bahuudhan naanneessaa san nageenyi akka hin buune gochuudha.Kun ammoo jarri tun hangama akka ofittoo ta’aniifi garee badi ta’an kan mul’isuudha.
6.Oromoon haala amma deemu kanaan kan dhaabatu akka hin taane waan beektuuf olloota Oormootii fira gaafa rakkoo horachuuf(Gargaarsa Sumaaleef gochaa jirtu ilaalaa) kun kutaalee biyyattii Ooromiyaa waliin daangaa waliin qaban hundarratti yaalamaa ture.(FKN Amaarafi Afaar gama Wallootiin,Gumuz karaa dhihaa,Sidaamaafi koonsoo kibbaafi kibba dhihaatin) Kana keessaa amma kan ishiin faana hojjechuu dandeechu sumaalee qofa.
← G U G S I I F A R D A A -AKKA T A PH A AA D A A O R O M O OTTI Beekan Gulummaa Irranaa Amajjii 2017
Amaloota Farra Qabsoo Oromoo Gaaga’aa jiran!:-A.Jundi-Maddi Rakkoo keenyaa iddoo kam jira? →